Sitemap-Cixi Wenap အင်တာနေရှင်နယ်ထရေးဒင်း Co. , Ltd မှ။
ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း | ကျွန်ုပ်တို့၏ပြပွဲ | Poduct အုပ်စုများ | ကုန်ပစ္စည်းလျှောက်လွှာ | ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သင်္ဘောတင် | ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ | ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံး
တည်ဆောက်ခြင်းပီပြင်ထောင့် | အလူမီနီရေစိုခံမျက်မမြင် Rivets | ပလပ်စတစ်အမှတ်တရ Plug Anchor | ကာဗွန်သံမဏိပြင်ဆင်ပြီးသုံး Anchor | hex ဌာနမှူး Wood ကဝက်အူ | hex ဌာနမှူးကိုယ်ပိုင် Drilling ဝက်အူ | စာရွက်သတ္တုကိုယ်ပိုင်နှိပ်ဝက်အူ | hardware Forge ရဲ့သံမဏိအကြံအဖန် | အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးကွန်ကရစ်သံမဏိလက်သည်း
လက်မဒါမှမဟုတ် Metric အဝတ်လျှော် | Fine Thread နှင့်အတူမက်ထရစ် hex အခွံမာသီး | မက်ထရစ် Countersunk ဌာနမှူးဝက်အူ Slotted | သွပ်ပန်းကန်ဟာ့ဒ်ဝဲ hex ဌာနမှူး Bolt | Threaded လှံတံ | နှစ်ချက်အဆုံးပိုက်ပြင် Wood ကဝက်အူ
မိုးသည်းထန်စွာ Duty စူပါပါဝါ Hose Clamp | ပလပ်စတစ်လိပ်ပြာလက်ကိုင်နှင့်အတူညှပ် | worm ဂီယာ Hose Clamp | အခွံမာသီးများနှင့်ပိုက်စံပိုက် Clamp
ပရိဘောဂများအတွက်ချိန်ညှိပေ | ပရိဘောဂများအတွက် angle bracket | ပရိဘောဂ Cam Lock ကိုစွဲစေ | Bolt အတွက်ပရိဘောဂများအတွက်စွဲစေ | ဝက်အူထဲမှာပရိဘောဂများအတွက်စွဲစေ | အခွံမာသီးထဲမှာပရိဘောဂများအတွက်စွဲစေ
နိုင်လွန်ကြေးနန်း Cable ကို Tie | ဝါယာကြိုးအဘို့အပလပ်စတစ် Cable ကို Clamp | သတ္တုကုန်းနှီး Clamp
အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အမျိုးသား Threaded Hose ဆူး | ဆဋ္ဌဂံဌာနမှူးအမျိုးသား Thread သောကြေးဝါ Bush | Adapter ကိုအဝတ်အစားအစမ်းဝတ် Reduce အထီးအတုကြေးဝါကို | နီကယ်ပန်းကန် finish နှင့်အတူကြေးဝါကို Nut | စားပြီးအမျိုးသားနို့သီးခေါငျးလျှော့ချ | ကြေးဝါကိုတံတောင်ဆစ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအဝတ်အစားအစမ်းဝတ် | ကြေးဝါကိုဖြောင့်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအဝတ်အစားအစမ်းဝတ် | တန်းတူ hex ဌာနမှူး Threaded ကြေးဝါကို Cap | အမျိုးသမီး Threaded ပိုက် Fittings | ကြေးဝါကို Chrome ကိုပန်းကန်အတိုင်းအတာ Fittings | Metric Thread နှင့်အတူကြေးဝါကို Compression ကို Tee | ပိုက်ပြင်ပစ္စည်းများအတွက်သောကြေးဝါတံတောင်ဆစ် | ကြေးဝါကဲ့သို့၎င်းအမျိုးသား Threaded hex နို့သီးခေါငျး
Underfloor အပူ Tube PEX တစ်ပိုက် | ပိုက်ပြင် System ကိုများအတွက် PEX B ကိုပိုက်
ကြေးဝါနှင့်ဖြောင့်သို့မဟုတ်ကွေးပုတ် Connector | ကြေးဝါကို Compression ကိုအင်္ကျီလက် | ရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်အဝတ်လျှော်ညီလာခံ | စံ Pex Lugged တံတောင်ဆစ် | ကြေးဝါကိုလျှော့ချရေးစင်တာသို့မဟုတ် End Tee | ကြေးဝါနှင့်ဖြောင့်သို့မဟုတ်စုံတွဲလျှော့ချ
သံမဏိအနန္တတန်ခိုးရှင် | Vernier Caliper | လူမီနီယမ်သောဝိညာဉ်တော်အဆင့် | ရော်ဘာ Jacket သံမဏိတိပ်တိုင်း
Hand Riveter | Double Head bit Toolkit ကို | ဝက်အူလှည့် | hex Key ကိုသတ်မှတ်မည်
SAE နျ Standard Hose များအတွက် Interlock Ferrule | Din နျ Standard Hose သည် Ferrule | SAE နျ Standard Hose သည် Ferrule | တရုတ်နျ Standard ဝါယာကြိုးကျစ် Hose သည် Ferrule
အဝတ်အစားအစမ်းဝတ် One Piece Hose | Interlock Hose အဝတ်အစားအစမ်းဝတ် | Swaged Hose အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်
ချိန်ညှိလုံးအို Ring ကိုတံဆိပ်ခတ်နှင့်အတူပြီးဆုံး | ဆုံလည် Nut နှင့်အတူ tube adapter | အို Ring ကိုအတူ thread | သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူ thread | ဖြောင့်ဒါမှမဟုတ်တံတောင်ဆစ် Bulkhead Fittings | ဖြောင့်သို့မဟုတ်တံတောင်ဆစ် BSPT အမျိုးသား
အနားကွပ်စုံတွဲ | မက်ထရစ် Adapter ကို | ဗြိတိန် Adapter ကို | အမရေိ Adapter ကို | စားစရာအမျိုးအစား Tube အဝတ်အစားအစမ်းဝတ် Din
သငျသညျထုတ်ကုန်သောသူတို့အား website တွင်ပြသကြသည်မဟုတ်ထောက်ပံ့နိုင်ပါသလား? | yourÂကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအနီးမဆိုဆိပ်ကမ်းသို့မဟုတ်လေဆိပ်ရှိပါသလား? | ခရီးဝေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုံခြုံမှုသေချာစေရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? | သင့်ရဲ့ MOQ ကဘာလဲ? | သငျသညျနမူနာများကိုပါသလား ကအခမဲ့သို့မဟုတ်အပိုပါသလဲ | ဘယ်လိုနှစ်ပေါင်းများစွာသင်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုပြုကြသနည်း | ထုတ်လုပ်မှုခဲအချိန်ဘယ်လောက်ကြာပါသလဲတစ်ဦး | ကုန်ပစ္စည်းများမှာဘယ်လိုနေသလဲ? | သင်ထုတ်ကုန်ပေါ်မှာငါတို့အမှတ်တံဆိပ် print ထုတ်နိုင်ပါသလား? | သငျသညျ OEM သို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးဒီဇိုင်းကိုလက်ခံပါသလား | ဘယ်လိုငွေပေးချေစေနိုင်သနည်း | သင်ဘယ်လိုကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးသလဲ? | ဘယ်အချိန်မှာငါစျေးနှုန်းအရနိုင်သလား? | ငွေပေးချေမှုသင့်ရဲ့စည်းကမ်းချက်များကိုကဘာလဲ? | အဘယ်အရာကိုစျေးနှုန်းကော? | သင့်ရဲ့ပေးပို့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာပါသလဲ | သင်တစ်ဦးကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသလား
Threaded rod | Heavy Duty Clamps applications and instructions | အဆိုပါရော်ဘာ Jacket သံမဏိတိပ်တိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းကဘာလဲ? | ပိုက်နှင့်ပိုက်ပြင်အဝတ်အစားအစမ်းဝတ် | 2018 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Fastener Show ကိုတရုတ် | စက်မှု Fastener ပစ္စည်းများ | အဘယ်အရာကို PEX-AL-PEXÂPipeÂတစ်BeÂUsedÂသည်နိုင်သလား? | PEX tube